महिनावारीको बेला सेक्स गर्ने बानी छ सावधान यो टिस् पढ्नुहोस् के हुन्छ ? - Nepal News - Latest News from Nepal
महिनावारीको बेला सेक्स गर्ने बानी छ सावधान यो टिस् पढ्नुहोस् के हुन्छ ?
महिनावारीको बेला यौन सम्पर्क गर्ने बानी छ । तर गर्दा के हुन्छ ? महिनावारीको बेलामा सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? गरेमा के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नले सधै तपाईलाई पिरोलिरहेको छ भने अब चिन्ता नलिनुस् ।
महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । यो व्यक्तिगत इच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो ।
कसैलाई महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन । महिनावारी भएका बेला यौन सम्पर्क गर्न नहुने भन्ने छैन ।
अदालत भित्र भएको यौनकाण्ड
किन बढ्यो पेन्सनको टेन्सन, किन बढ्यो